IBucs iyoyibamba phesheya | Isolezwe
IBucs iyoyibamba phesheya
ezemidlalo / 8 November 2018, 3:39pm / DUDUZO DLADLA
IQEMBU lePirates 5 elizoyodlala e-England. Isithombe: SITHUNYELWE
ILIBANGISE e-England i-Orlando Pirates edlala i-Five-a-side eshaya kwasani kontanga yabo eNingizimu Afrika kulesi sigaba.
EZimnyama zizodlala imidlalo yesihle namaqembu ase-England angakaqinisekiswa kusuka ngoNovemba 22, kuze kube uNovemba 27.
I-Bucs (esebenza ngaphansi kwesitifiketi seqembu elikhulu) ibisingethe umqhudelwano kazwelonke owaziwa ngeKlipdrift Cup ngo-Okthoba 27.
Lo mqhudelwano ubungaphansi kwenhlangano eyengamele i-Five-a-side eyaziwa ngeFives Futbol.
Lo mqhudelwano ubunamaqembu ayisishiyagalombili aqhamuka kuzo zonke izifundazwe zakuleli. Abe esehlukaniswa, kwaba ngamane iqoqo ngalinye. Emidlalweni emithathu, iPirates iyinqobe yonke yaqhwakela eqoqweni layo.
Umgadli weZimnyama uJose "Jokabonita" Garcia (oke wadlalela iBaroka FC), ushaye amagoli ayisithupha emidlalweni emithathu esigabeni samaqoqo.
Sekungumlando ukuthi kowamanqamu iBhakabhaka linqobe ngo 5-3. Kungakho lizolibangisa e-England emidlalweni yesihle namaqembu akhona. Okuzojabulisa kakhulu abadlali beBucs ukuthi bazothola ithuba elingandele bani lokuyobuka umdlalo phakathi kweWest Ham United neManchester City ozobe use-Olympic Stadium ngoNovemba 24.
Phakathi kwabaxhasi abeseka iBucs Five's singabala inkampani yezingubo zokugqoka zemidlalo i-Adidas, kube inkampani yezinto zokugcoba iHerbal Icema eneminyaka engu-20 isebenza eNingizimu Afrika. Le nkampani isiza kakhulu kubantu abaphukile njengoba ikwazi ukupholisa iphinde ithambise namamasela.
Enye inkampani exhase leli qembu i-340 on Main Health & Wellness Centre esiza ngokululeka abadlali ngokomqondo nakwezinye izinto ezithinta ukusebenza komqondo.